Amapuleti ensimbi, Izinsimbi Ezingafakwanga, Ipayipi Lensimbi - UKunda
Gqoka i-Plate Steel Resistant
Isimo Sezulu Sokuvikela Insimbi
I-Carbon Steel Plate
Sisebenza ngokukhiqiza amapuleti ensimbi agqokekayo, amapuleti ensimbi amelana nesimo sezulu, amapuleti wensimbi ye-alloy, amapuleti ensimbi anamandla amakhulu, amapuleti ahlanganayo agqokekayo, amapuleti ethangi, amapuleti ezitsha zokucindezela, kanye namapuleti ensimbi e-shipboard. Okuningi
Ipuleti lensimbi yeCarbon, ishidi lensimbi lekhabhoni, ikhoyili yensimbi yensimbi iCarbon steel iyinsimbi enokuqukethwe kwekhabhoni efinyelela ku-2.1% ngesisindo. Ukugoqa okubandayo kwe-Carbon steel plate ngezansi kwe-0.2-3mm, ukugoqa okushisayo kwe-Carbon plate ukujiya okungu-4mm kuze kufike ku-115mm Q195 (ST33), Q215A, Q215B, Q235A, Q235B (SS400), Q235C, Q235D, Q255A ...
Amapuleti wensimbi agqokayo abhekisele kwimikhiqizo yamapuleti ekhethekile esetshenziswa ngaphansi kwezimo zokugqoka ezinkulu. Njengamanje, amapuleti wensimbi agqokiwe asetshenziswa kakhulu amapuleti enziwe ngensimbi ejwayelekile ephansi yensimbi noma ngensimbi ephansi enobulukhuni obuhle nopulasitiki ngokufaka iwelding ngogqinsi oluthile ...
I-Weathering Steel ingavezwa emoyeni ngaphandle kokupenda. Iqala ukugqwala ngendlela efanayo nensimbi ejwayelekile. Kepha kungekudala izinto ezihlanganayo ezikulo zibanga ungqimba olungaphezulu oluvikelwe lokugqwala okuhlelekile, ngaleyo ndlela kucindezelwe izinga lokugqwala. Insimbi yesimo sezulu ibonisa ukumelana okuhle ...
IPlate ye-Stainless Steel inendawo ebushelelezi, i-plasticity ephezulu, ukuqina namandla we-mechanical, futhi iyamelana nokugqwala ngama-acids, amagesi ane-alkaline, izixazululo neminye imidiya. Kuyinsimbi engxubevange okungelula ukugqwala, kepha ayinakho ukugqwala ngokuphelele. Ipuleti lensimbi engagqwali libhekisela ...
ibha yensimbi eyisikwele yensimbi
insimbi engagqwali round bar
insimbi engagqwali ibha yesikwele
insimbi engagqwali round ipayipi
carbon steel pipe isikwele
carbon steel round ipayipi
Ipuleti lokuhola lidinga ukuba wugqinsi olungu-4 kuye ku-5 mm ukuvikela emisebeni. Ingxenye eyinhloko yepuleti yomthofu ingumthofu, isilinganiso sayo sinzima, ukuminyana kuphezulu; Ipuleti eliholayo luhlobo lwepuleti elenziwe ngokucindezela imicu yomthofu wensimbi ngemuva kokuncibilika. Inemisebenzi yokuvikela imisebe, i-corrosio ...
Inokumelana nokugqwala okuqinile, ukumelana ne-acid ne-alkali, ukwakhiwa kwemvelo okungamelana ne-asidi, ukuvikelwa kwemisebe yezokwelapha, i-X-ray, ukuvikelwa kwemisebe yegumbi le-CT, ukubhebhethekisa, ukuvala umsindo nezinye izinto eziningi, futhi kuyinto yokuvikela imisebe eshibhile. Okuvamile ...
I-Aluminium iyi-meta emhlophe futhi ekhanyayo, ehlukaniswe yaba yi-aluminium emsulwa ne-aluminium alloy. Ngenxa yokuthi i-ductility, futhi ivame ukwenziwa induku, ishidi, ukuma kwebhande. Ingahlukaniswa: ipuleti le-aluminium, ikhoyili, umucu, ishubhu, nenduku. I-Aluminium inezinto ezahlukahlukene ezinhle kakhulu, ngakho-ke ine ...
Inkampani yethu iyinsizakalo yeLaiwu Steel futhi yasungulwa ngo-2010 ngemvume ye-Bureau of Industry and Commerce. Ngenhlokodolobha ebhalisiwe ye-RMB 1 billion, iyinkampani yokwakha ehamba phambili enezici zesakhiwo sensimbi eChina.
Sisebenza ngokukhiqiza amapuleti ensimbi agqokekayo, amapuleti ensimbi amelana nesimo sezulu, amapuleti wensimbi ye-alloy, amapuleti ensimbi anamandla amakhulu, amapuleti ahlanganayo agqokekayo, amapuleti ethangi, amapuleti ezitsha zokucindezela, kanye namapuleti ensimbi e-shipboard.
Imikhiqizo Izindaba Mayelana NATHI Xhumana nathi
Singama-ejensi amafemu we-Steel adumile e-China.Singaba 100% ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yezimpahla zethu. Okwesibili: Sinesikhungo sethu sokucubungula, esinganikeza insizakalo eyenziwe ngezifiso njengokugoba, ukushisela, ukupholisha, ukwelashwa kokugqwala, okuhlanganisiwe. Xhumana nochwepheshe
2020, amanani emakethe yensimbi yaseChina azothengisa ...
I-Regional Comprehensive Economic Partn ...
Abathengisi bensimbi nezimboni ngaphakathi ngaphakathi ...
Ikheli: 2F, Isakhiwo Samanje Samazwe Ngamazwe, Isifunda saseDongchangfu, iLiaocheng, Shandong, China